ဗေဒင် – Shwemyanmar
တ်ဆွေများအားလုံးအတွက် … (၂၀၁၈)ခုနှစ်အတွက် . ( ၁) နှစ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်းကြီး
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် … (၂၀၁၈)ခုနှစ်အတွက် . ( ၁) နှစ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်းကြီး . #အင်္ဂလိပ်ရက် ၁ ရက် ၊ ၁၀ ရက် ၊ ၁၉ ရက် ၊ ၂၈ ရက်မွေးဖွားသောမိတ်ဆွေများသည် ခရစ်သက္ကရာဇ်၂၀၁၈ ခုနှစ် မင်္ဂလာနှစ်သစ်တွင် … ကံကြမ္မာဟာ အကောင်းမှအဆိုး ၊ အဆိုးမှအကောင်းသို့ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ရောက်ရှိသွားအံ့။ အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်အံ့။ စီးပွားရေး၊ငွေကြေး ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာရည်ရွယ်ချက်များအတွင်လည်း တအားကောင်းနိုင်သလို တအားလည်းညံ့သွားအံ့။ သူတပါးအတွက် ဓါးစားခံဖြစ်တတ်။အစစအရာရာသတိထားပြီးဖြတ်သန်းသင့်။ မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို သူတစ်ပါး နှောက်ယှက်အံ့။စိတ်ပူစရာ ၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ ၊ အတိုက်အခံ ၊ အခက်အခဲများ ရောထွေးနေအံ့။ ရှေ့မတိုးသာ၊နောက်မဆုတ်သာ ၊ ရှေ့တိုးရခက် ၊ နောက်ဆုတ်ရခက် အခြေအအေများကြုံတွေ့ရအံ့။ အကြံအစည် […]
Posted inဗေဒင်LeaveaComment on တ်ဆွေများအားလုံးအတွက် … (၂၀၁၈)ခုနှစ်အတွက် . ( ၁) နှစ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်းကြီး
စီးပွားရေးကျဆင်းနေသူများ နှင့် ငွေရေးကြေးရေးလက်လွန်ထားသူများအတွက် ယတြာ စီးပွားရေးလုပ်ရာတွင် အပြိုင်အဆ်ိုင် အနှောက်များနေပီး လာလ်လာဘပိတ်နေခြင်း၊ မိမိပိုက်ဆံတွေ သူတစ်ပါးထံလက်လွန်မိနေခြင်း၊ အလိမ်ခံရခြင်း၊ အာမခံပေးထားသောငွေများ ပြန်မပေးပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူများထံမှ ပြန်ရစေရန်အတွက် အစီရင်လေးကို ဆရာအာကာကိုယ်တိုင်ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်များ လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ကြေးပန်းကန်ပြား တစ်ချပ် ကြေးညောင်ရေအိုး အသေးတစ်လုံး ဆန်နို့ဆီဗူး တစ်လုံး နနွင်းမှုန့် အနည်းငယ် သရက်ရွက် ၉ရွက် ရွှေဖရုံသီး တစ်လုံး ဖယောင်းတိုင် ၂၇တိုင် ကြေးပန်ကန်းပြားပေါ်တွင် ဆန်တစ်ဗူးအားဖြန့်၍ထည့်ရမည်။ အဲ့ဒီဆန်ခင်းထားသည့်အပေါ်တွင် နနွင်းမှုန့်ကိုဖြန့်၍ထည့်ရမည်။ အဲ့ဒီအပေါ်တွင် ကြေးညောင်ရေအိုးကို ရေအပြည့်ထည့်၍တင်ပေးရမည်။ အဲ့ဒီအိုးအပေါ်တွင် သရက်ရွက်(၉)ရွက်ကို ထိုးပေးရမည်။ သရက်ရွက်ထိုးပီး အပေါ်တွင် ရွှေဖရုံသီးက်ိုတင်ပေးလိုက်ပါ။ ️ရွှေဖရုံသီး အပေါ်နေရာကနေ ဖယောင်းတိုင်(၃)တိုင် စ်ိုက်ပီးမီးထွန်းပေးလိုက်ပါ။ ဤအစီရင်ကို ကြာသပတေးနေ့ မနက်၈:၄၅မိနစ် အချိန်၌ ဘုရားစင်အရှေ့တွင်စတင်ပြုလုပ်ရပါမည်။ စလုပ်သည့်နေမှစ၍ ရွှေဖရုံသီးအပေါ်တွင် […]
Posted inဗေဒင်LeaveaComment on စီးပွားရေးကျဆင်းနေသူများ နှင့် ငွေရေးကြေးရေးလက်လွန်ထားသူများအတွက် ယတြာ
ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်.
ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်. မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မှဲ့တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုစီရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့မှဲ့တွေကတော့ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်း စိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ နှုတ်ခမ်းအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့မှဲ့ အရမ်းကို ကောင်းတဲ့မှဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွယ်တူတန်းတူတွေထက် ငွေကြေး၊ အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိတတ်တဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ ဒီလိုမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေက ခေါင်းနည်းနည်းမာတဲ့ သဘာဝရှိပေမဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ်အရမ်း ကို မြန်မြန် ဆန်ဆန်ေ အာင်မြင်တတ် တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့ နှာခေါင်းရဲ့တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာမှဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အော င်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးနှစ်ခုစလုံးက အသက် […]
Posted inဗေဒင်LeaveaComment on ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်.
အိမ်တွင်းရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမူရေး၊ ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေချင်ရင်
အိမ်တွင်းရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမူရေး၊ ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေချင်ရင် အိမ်တွင်းရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမူရေး၊ ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေချင်ရင် အိမ်တွင်းရေး မိသားစုကိစ္စပြဿနာများဖြစ်ပေါ်နေပြီလား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှောက်နှေးမှု့များနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်နေပြီလား လူမူရေးကိစ္စရပ်များ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အဆင်မပြေမှု့များဖြစ်ပေါ် ဖြေရှင်းနေရပြီလား ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စရပ်များ အဆင်မပြေမှု့များနှင့်ကြုံတွေ့ ဖြေရှင်းနေရပြီလား ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် မေတ္တာစေတနာအပြည့်ထားပြီး ဆရာကိုယ်တိုင်ရေးသားတွက်ချက်၍ထိရောက်သော ယတြာကောင်းတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ်။ အိမ်တိုင်းပြုလုပ်သင့်သည့် ယတြာကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ￼ ဒီယတြာလေးတွေကိုသေချာပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်(၇)ရက်သားသမီးများအားလုံးဆရာ့မေတ္တာအစွမ်းကြောင့်သောကပျောက်ကင်းကြပါစေခင်ဗျာ။ ဒီ Post ကနေ မိတ်ဆွေတို့အတွက် တစ်စုံတစ်ရာအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် အခြားသူတွေပါ အကျိုးရရှိစေဖို့PostကိုShareပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ ￼လုပ်ရမည့် အထူးယတြာလေးကတော့…………….. ကြာသပတေးနေ့ မနက်7း00-9း00နာရီကြား မိမိ၏နေအိမ်၌ပြုလုပ်ပါ ပုံပါပြထားသည့်အတိုင်း စတီးပန်းကန်ပြားထဲတွင် ဆန်(၃)ဆုပ်ထည့်ပါ၊ စတီးအိုးတစ်လုံးတွင်ရေထည့်ပြီး သရက်ရွက်(9)ရွက်ပေါ်တွင် အုန်းသီး တစ်လုံးကို ပိတ်စအနီဖြင့် ပတ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါ။ အိုးတွင် ရွှေဆိုင်းနဲနဲကပ်ပေးရပါမည်။ ပြီးလျှင် အရဟံ သဒ္ဒိ…တစ်လုံးချပြီး […]
Posted inဗေဒင်LeaveaComment on အိမ်တွင်းရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမူရေး၊ ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေချင်ရင်
​၂၀၁၇-ခု ၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် လူမျိုးခြားက ကူညီခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ အောင်မြင်ခြင်းများကြုံမည်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်ခြင်း ဘုန်တန်ခိုး တိုးတက်ခြင်းများ ကြုံရမည်။ မနာလိုသူလည်း ပေါ်လိမ့်မည်။ ဤကာလအတွင်း မည်သည့်အခက်အခဲနှင့် ကြုံသည် ဖြစ်စေ အားကိုး မရှာနှင့်။ ဒုက္ခပေးမည့်သူများသာ ပေါ်လာတတ်သည်။ ဘုရားဆင်တုတော်၊ ပုံတော်၊ ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။ ကျောဒုက္ခပြေးခြင်း၊ ကျော၌ရောဂါရခြင်း ဖြစ်မည်။ အိမ်ပြင်၊ အိမ် ဆောင်၊ အိမ်ပြောင်း မပြုပါနှင့်။ မထင်မှတ်သော ခရီးများ မရည်ရွက်သော ခရီးများသွားရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးကိစ္စအတွက် ခရီးသွားရတတ်သည်။ အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲ အစီစဉ်များ အထစ်အငေါ့ကြုံခြင်း ရက်ရွှေ့ခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်နေမည်။ ဤလအတွင်း အမှုအခင်း မဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ဖြစ်လျှင် မပြီးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတတ် […]
Posted inဗေဒင်LeaveaComment on ​၂၀၁၇-ခု ၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
အိမ် ခြံ မြေ အမြန်ရောင်းထွက်လိုသော်
🏚အိမ် ခြံ မြေ အမြန်ရောင်းထွက်လိုသော် ————————————– ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်မေတ္တာစေတနာအပြည့်ဝဖြင့်ဆရာကိုယ်တိုင်ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။ #Share 🔹မိမိရောင်းလိုသောမြေကို ပန်းကန်လုံးဖြင့်ထည့်ပါ။ 🔹အာလူးသုံးလုံးထည့်ပါ။ ကြံ လက်တစ်ဖြား ဖြတ်၍တင်လိုက်ပါ။ 🔹အင်္ကျီအဖြူဝတ်၍ပြုလုပ်ရမည်။ 🔹ထိုပန်းကန်တွင် ဆန်တစ်ဆုပ် ပေါက်ပေါက်တစ်ဆုပ် ဆနွမ်းတစ်ဆုပ်ထည့်ပါ။ 🔹အာလူးသုံးလုံးပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်စီထွန်းပါ။ 🔹တနင်္ဂနွေသားသမီးဖြစ်ပါက အုန်းညွှန့် (၃)ညွှန့်ဖြင့် ထိုပန်းကန်ကို (၃)ချက်ရိုက်ပါ။ 🔹တနင်္လာသားသမီးဖြစ်ပါက ကံ့ကော် (၃)ညွှန့်ဖြင့် ထိုပန်းကန်ကို (၃)ချက်ရိုက်ပါ။ 🔹အင်္ဂါသား ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေး သောကြာ စနေ ရာဟု သားသမီးများ အားလုံး ထိုနည်းတူ မွေးနံသင့်ပန်းများဖြင့် ဉာဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ 🔹ဥုံ အောင်စေတု အောင်စေတု အောင်စေတု ဟုရွတ်ဆို၍ ရိုက်ပါ။ 🔹အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ရန် ဆုတောင်းပါ။ 🔹ကြာသပတေးနေ့တွင် တစ်ကြိမ်တည်းသာပြုလုပ်ပါ။ 🔹ထူးထူးခြားခြားနဲ့သိသာလာပါလိမ့်မည်။အောင်မြင်ကြပါစေ။ 🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚 နက္ခတ်ဗေဒင် […]
Posted inဗေဒင်LeaveaComment on အိမ် ခြံ မြေ အမြန်ရောင်းထွက်လိုသော်
အတိုက်​အခံ​တွေများ​နေသလား? သက်တော်မြဲဂါထာဂါထာရွတ်လိုက်ပါ မနာလိုမုန်းထား မကောင်းသော အတတ်ပညာတို့နှင့် ပြုစားခဲ့လျှင်တောင်မှ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင် လာရောက် တောင်းပန်ရသည်​ အဋ္ဌာနမေတံ ဘိက္ခဝေ အနဝကာသော ယံ ပရူပက္ကမေန တထာဂတံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေယျ။ အနုပက္ကမေန ဘိက္ခဝေ တထာဂတာ ပရိနိဗ္ဗာယန္တိ။ ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေန၊ သောတ္ထိ မေ ဟောတု သဗ္ဗဒါ။ ဘိက္ခဝေ. ချစ်သားရဟန်းတို့။ ယံ အကြင်အကြောင်းကြောင့်။ ပရူပက္ကမေန. သူတပါးတို့၏ လုံ့လပယောဂဖြင့်။ တထာဂတံ သင်တို့ဆရာငါဘုရားကို။ ဇီဝိတာ ရုပ်နမ် နှစ်ထွေ မြွတ်ဖေါ် အသက်တော်မှ။ ဝေါရောပေယျ ခွင်းခါပျက်ခြွေ ချသတ်လေရာ၏။ ဧတံ ဤသို့ ရုပ်နမ်ခွင်း ပျက်ချနိူင်ခြင်းသည်။ အဋ္ဌာနံ အကြောင်းအချင်းအရာ မဟုတ်သည်သာတည်း။ ဧတံ-ဧသော ဤသို့ ရုပ်နံပျက်ခွင်း […]
Posted inဗေဒင်LeaveaComment on အတိုက်​အခံ​တွေများ​နေသလား? သက်တော်မြဲဂါထာဂါထာရွတ်လိုက်ပါ
#ကိုယ့် ဆိုင် လာဘ်ပွင့် ချင်ရင်
#ကိုယ့် ဆိုင် လာဘ်ပွင့် ချင်ရင် ——————————– မိမိ၏ ဆိုင် ၊ စက်ရုံ ၊ ဆောင်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ စတိုးဆိုင် ၊ စားသောက်ဆိုင် ၊ ကုန်စုံဆိုင် စ တဲ့ အင်္ဂါနံ လုပ်ငန်းများ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာဘ်ရွှင် ငွေဝင်ချင်တယ် ဆိုရင် …. ၁။ အင်္ဂါနေ့မနက် 9း45 မှ စပြီး ကြွေပန်းကန်ထဲ လဖက်အသားချည်း ၅ ပုံ ပုံထည့် လှူ ပေးပါ။ ၂။ ကြွေပန်းကန်ထဲ လစ်ပို ပုလင်း တင်ပြီး အပေါ်မှ ဖယောင်းတိုင် တင်ထွန်းပြီး ဆုတောင်းပါ။ မနက်တစ်တိုင် ည တစ်တိုင် ၉ ရက်တင်ထွန်းပေးပါ။ ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ် […]
Posted inဗေဒင်LeaveaComment on #ကိုယ့် ဆိုင် လာဘ်ပွင့် ချင်ရင်
ရောင်းချင်တာတွေ ရောင်းထွက်ဖို့ ယတြာပေါင်းချုပ် ဇင်ယော်နီ
ရောင်းချင်တာတွေ ရောင်းထွက်ဖို့ ယတြာပေါင်းချုပ် ဇင်ယော်နီ မနောမယဂမ္ဘီရဂျာနယ်
Posted inဗေဒင်LeaveaComment on ရောင်းချင်တာတွေ ရောင်းထွက်ဖို့ ယတြာပေါင်းချုပ် ဇင်ယော်နီ